Goethite amethyst - New update 2021 - Great video
Goethite amethyst meaning
Goethite amethyst လင်းကျောက်။
တစ်စုံတစ် ဦး ကတစ်ချိန်ကထိုပါဝင်မှုကို cacoxenite ဟုသတ်မှတ်ပြီး၎င်းသည်တွင်းထွက်သဘာ ၀ နှင့်မသဲကွဲသောကြောင့်သို့သော် cacoxenitemay နှင့်အတူ amethyst လုံးဝမရှိခဲ့ပါ။
၎င်းကိုသမိုင်းအစဉ်အလာအရဘရာဇီးတွင် cacoxenite ဟုခေါ်သည်။ သိပ်မကြာခင်မှာပင်လက်တွေ့လေ့လာမှုတစ်ခုပြုလုပ်ခဲ့ပြီးထိုအချိန်တွင်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးစက်နှင့်လူများ၏ cacoxenite ဟုခေါ်သည့်အလေ့အထကိုပြောင်းလဲရန်နောက်ကျသွားပြီဖြစ်သည်။
ဤပစ္စည်းသည်ယခင်က Sao Gabriel၊ ဘရာဇီး၊ Rio Grande do Sul ဟုခေါ်သည့် Ametista do Sul တစ်ဝိုက်မှဖြစ်ပေါ်လာသော amethyst အမျိုးအစားများဖြစ်သည်။
Goethite သည် ferric iron ပါဝင်သောသံ oxyhydroxide ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်သံချေးနှင့်သံသတ္တုရိုင်း၏အဓိကအစိတ်အပိုင်းဖြစ်သည်။ Goethite ၏မာကျောမှုသည် Mohs Scale မှ ၅၀ မှ ၅.၅ အထိရှိပြီး၎င်း၏တိကျသောဆွဲငင်အားသည် ၃.၃ မှ ၄.၃ အထိကွဲပြားသည်။ တွင်းထွက်ပစ္စည်းများသည် prismatic အပ်ကဲ့သို့သော crystals များ၊ needle iron သတ္တုရိုင်းများဖြစ်သော်လည်းပိုမိုကြီးမားသည်။
Feroxyhyte နှင့် lepidocrocite နှစ်ခုလုံးသည် iron oxyhydroxide FeO (OH) ၏ polymorphs များဖြစ်ပြီးကမ္ဘာ့မျက်နှာပြင်၏ဖိအားနှင့်အပူချိန်အခြေအနေများတွင်တည်ငြိမ်ကြသည်။ သူတို့မှာ goethite ကဲ့သို့ဓာတုဗေဒဆိုင်ရာပုံသေနည်းများရှိသော်လည်းကွဲပြားခြားနားသောပုံဆောင်ခဲဖွဲ့စည်းပုံများသည်၎င်းတို့ကိုတွင်းထွက်သတ္တုများဖြစ်စေသည်။
Amethyst သည်ခရမ်းရောင်အမျိုးမျိုးနှင့်အမျိုးမျိုးသောအသွင်ကူးပြောင်းမှုသတ္တုများကိုဓါတ်ရောင်ခြည်ဖြာခြင်း၊ ၎င်း၏အပြာအရောင်များနှင့်အချို့သောအကူးအပြောင်းသတ္တုများကြောင့်ရှုပ်ထွေးသောကြည်လင်ပြတ်သားမှုဖြင့်အစားထိုးခြင်းတို့ကြောင့်ဖြစ်သည်။ သတ္တု၏မာကျောမှုသည်လင်းကျောက်ကဲ့သို့တူညီသောကြောင့်လက်ဝတ်ရတနာများတွင်အသုံးပြုရန်သင့်တော်သည်။
Amethyst ကိုပန်းရောင်ရောင်မှသည်ခရမ်းရောင်နက်ပြာရောင်အထိအဓိကတွေ့ရသည်။ Amethyst သည်အနီရောင်နှင့်အပြာတစ်ခုသို့မဟုတ်နှစ်ခုလုံးအတွက်အလယ်အရောင်များကိုပြသနိုင်သည်။
Of very variable intensity, the color of amethyst is often laid out in stripes parallel to the final faces of the crystal. One aspect in the art of lapidary involves correctly cutting the stone to place the color inaway that makes the tone of the finished gem homogeneous.
Often, the fact that sometimes onlyathin surface layer of violet color is present in the stone or that the color is not homogeneous makes foradifficult cutting.
ဘရာဇီးမှ Goethite amethyst ။
ကျွန်ုပ်တို့သည်ပြုလုပ်ထားသောအမွှေးအကြိုင်များကိုလက် ၀ တ်ရိတ်ကွင်းများ၊ လည်ဆွဲများ၊ နားကပ်များ၊ လက်ကောက်များ၊ ကြှနျုပျတို့ကိုဆကျသှယျရနျ တစ်ကိုးကားသည်။
နီလာခရမ်းရောင် 13.41 CT
နီလာခရမ်းရောင် 4.02 CT
နီလာခရမ်းရောင် 6.90 CT
နီလာခရမ်းရောင် 7.64 CT
နီလာခရမ်းရောင် 17.49 CT
နီလာခရမ်းရောင် 4.98 CT
နီလာခရမ်းရောင် 9.59 CT